05 / 06 / 2021 05 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 606 Views စာ0မှတ်ချက် 10189, ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, ၁၀၂၇၆ Colosseum, ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, art, Creator Expert, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, LEGO art, Lego Creator Expert, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ninjago, Lego Ninjago အမွေအနှစ်, Lego Star Wars, ထောင်စုနှစ်စွန်ငှက်, Ninjago, Ninjago City, NINJAGO အမွေအနှစ်, Star Wars
အဆိုပါ Lego Group သည်အကြီးမားဆုံးသောအစုံများနှင့်အတူသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းများကိုဆက်လက်ချိုးဖောက်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်မော်ဒယ်များသည်အုတ်သမိုင်းတွင်အမှတ်အသားပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သနည်း။
ဒဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ အကြီးမားဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာထူး update လုပ်ဖို့အချိန်လာပါတယ် Lego စာရင်းဖြည့်အများအပြားကြီးမားခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖို့မော်ဒယ်များနှင့်အတူအစဉ်အဆက်သတ်မှတ်။
မူလတီထွင်ဖန်တီးမှုမှသည်ဝေးဝေး၊ အဝေးကြီးနှင့်မှော်အတတ်နှင့်ပြည့်စုံသောကမ္ဘာပေါ်တွင်အခြေပြုတည်ဆောက်ခြင်းများအထိအကြီးဆုံးမှာခြောက်ခုဖြစ်သည် Lego တရားဝင်ဝယ်ယူမှုအတွက်တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့ဖူးကြောင်းမော်ဒယ်များ:
၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အတွက်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် Lego Ninjago နှင့်မည်သည့်၏ skyline သို့ဆန့်ကြောင်း Multi- ထပ်ထပ်မော်ဒယ်ပါရှိပါတယ် Lego စုဆောင်းမှု။ အခြားနှင့် fit ရန်ဒီဇိုင်းထုတ် Ninjago City အစုံလိုက်၊ အရောင်၊ အသေးစိတ်နှင့်စွဲမက်ဖွယ်ရည်ညွှန်းချက်များပါဝင်သည် Lego အုပ်စု၏သမိုင်းနှင့် Ninjago တီဗီရှိုး။
ကမ္ဘာ၏နေစဉ် Ninjago ဤစာရင်းရှိအခြားပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုသင်္ကေတများနှင့်အထင်ကရနေရာများကဲ့သို့မှတ်မိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် ၅.၆၈၅ ကိုထုတ်ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာရည်မှန်းချက်အကြီးဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးအတွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နေတုန်းဘဲ၊ မော်ဒယ်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလတ်တွေအကြောင်းပိုသိနိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်.
ဒီ particular မော်ဒယ် re- ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် remade ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ဗားရှင်းမှာ ၁၀၁၈၉ Taj Mahal (နှစ်မျိုးလုံးတွင်တူညီသောအရေအတွက်ရှိသည်) ဖြစ်ပြီး remake သည် ၂၀၂၁ အသစ်ဖြစ်သည် Architecture ၁၀၁၈၉ Taj Mahalဤတည်နေရာသည်မည်မျှအမှတ်ရစရာရှိကြောင်းသက်သေပြခြင်း Lego Group မှ။
မူရင်းတည်ဆောက်မှုသည်အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Lego အဓိကအမိုးခုံးအဆောက်အအုံ၏ timeless ပုံသဏ္surroundingာန်ပတျဝနျးကငျြ spiers လေးနှင့်အတူအားလုံးအချိန်အုတ်, ထားသော 5,923 မှာအစု။ ယခင်မော်ဒယ်များကိုယခုမရရှိနိုင်သော်လည်းအသစ်နှင့် ပိုမို၍ ဘတ်ဂျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည် ၁၀၁၈၉ Taj Mahal ထွက်သွားပြီ
အကြီးဆုံးနှင့်အတူမှော်နှင့်ဝိဇ္ဇာအတတ်၏ကမ္ဘာသို့ခရီး Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် 6,020 မှာ။ ဤမိုက်ခရိုစကေးရဲတိုက်တွင်သင်အကြိုက်ဆုံးမြင်ကွင်းများကိုရုပ်ရှင်များမှပြန်လည်ဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာကျောင်းသားများ၏လှေလှော်များသည်သူတို့၏ Hogw နေအိမ်အသစ်ဆီသို့ရွက်လွှင့်သည့်အခါအထင်ကရအခိုက်အတန့်များဖြစ်သည်။arts.
အတွင်းခန်းတစ်ခုလုံးကို ၂၇ မိုက်ခရိုဓာတ်ပုံများပြုလုပ်ရန်အသိအမှတ်ပြုနိုင်သောအခန်းများနှင့်ပါ ၀ င်သည်။ Minifigures များကို Hogw တည်ထောင်သူလေး ဦး နှင့်အတူပုံစံမကျပါarts ကိုအိမ်များဒီအစုံအတွက်သီးသန့်ကိုယ်စားပြုသည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှယခုရရှိနိုင်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမကငြင်းပယ်ရှိပါတယ် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon မဆိုအကြားထွက်ရပ်တည် Lego စုဆောင်းခြင်းသည်၎င်း၏ဝေးကွာသောဝေးလံသည့်နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုမှအထင်ကရအာကာသယာဉ်အဖြစ်သာမကကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်အတိုင်းအတာအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ 75192 Millenium Falcon သည်ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည် Lego အားလုံးအချိန်အစုံနှင့် 7,541 အပိုင်းပိုင်းနှင့် 10 minifigures မှာလာပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဖတ်ရှုနိုင်သည် ပြန်လည်သုံးသပ် ဒီကြီးမားတဲ့မော်ဒယ်ကမင်းရဲ့စုဆောင်းမှုကိုကောင်းကောင်းဖြည့်စွက်ပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါ LEGO.com 2017 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက် set ကိုနေဆဲရရှိနိုင်ရှိရာ။
2 - Creator Expert ၁၀၂၇၆ Colosseum
ဤစာရင်းတွင်ပါသောဒုတိယမှတ်တိုင်သည် ၁၀၂၇၆ Colosseumတစ်ချိန်ကအကြီးဆုံး Lego အားလုံးအချိန်မော်ဒယ်။ ဒီအစုမှာအုတ် ၉,၀၃၆ ပါရှိပြီးသင့်အိမ်မှာနေရာအတော်အတန်ယူဖို့သေချာပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်နေရာယူရန်အတွက်ထိုက်တန်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၁၀၂၇၆ Colosseum မမေ့နိုင်သောနောက်ဆုံးမော်ဒယ်တစ်ခုပြုလုပ်သောအချိန်ကုန်ပြီးစိန်ခေါ်မှုရှိသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကအကြီးမားဆုံးအဖြစ်အထွreme်အမြတ်တည်းဟူသောနန်းစံကြပေမည်ပေမယ့် Lego တစ်ခုသတ်မှတ်ထားသည်၊ တစ်ခုမှာ၎င်း၏နေရာကိုယူရန်ထလာခဲ့သည်။
မသာမ 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ အများဆုံးပါရှိသည် Lego တစ်ခုချင်းစီကိုအစဉ်အဆက် 11,695 ဒြပ်စင်မှာအပိုငျးပိုငျးအပိုင်းအစများ, ဒါပေမယ့်သူလည်းသိပ္ပံနည်းကျမော်ဒယ်။ အခြား monotone တည်ဆောက်မှုကိုအရောင်များစွာသယ်ဆောင်ပေးသောသမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်သည်နက်ပြာသောပင်လယ်ရေအနက်ကိုတိုင်းတာခြင်းသည် batymetry တစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုကဲ့သို့ Lego အစုံ, 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအားပေးပါတယ်၊ မြင်ကွင်းကိုပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းမှသည်သင်၏နေအိမ်ကိုဗဟိုတွင်ပြသရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများကိုပြသနိုင်ရန်အတွက်သမုဒ္ဒရာများနှင့်ရောနှောခြင်းအထိဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Lego အစုံသည်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ယခုထွက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဤအုတ်ခဲသမိုင်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
← LEGO အုတ်၏သေတ္တာကြီးသည်ဇွန်လတွင် ပို၍ ပင်တန်ဖိုးရှိသည်
Lego အသစ် City တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး polybag တွေ့ရှိ →